TETIANDROM-PIFIDIANANA :: Fantatra ny daty hamoahana ny kandidà lany ho Filoham-pirenena vaovao • AoRaha
TETIANDROM-PIFIDIANANA Fantatra ny daty hamoahana ny kandidà lany ho Filoham-pirenena vaovao
Navoakan’ny Vaomieram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana (Ceni), omaly, ny fandaharam-potoana momba ny fizotran’ ny fikarakarana ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa hatrany amin’ny fiafarany, izany hoe ny fivoahan’ny vokatra feno sady ôfisialy. Fantatra tao anatin’izany fa amin’ny 9 janoary 2019 no havoakan’ny Fitsarana avo momba ny Lalàm-panorenana (HCC) ny vokatra ôfisialin’ny fifidianana fihodinana faharoa hotanterahina, amin’ny 19 desambra ho avy izao, ka hahalalana an’izay Filoha vaovao hitondra an’i Madagasikara indray.
Vao manomboka ny taona vaovao 2019 dia hosantarin’ny Ceni amin’ny famoahana ny voka-pifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa vonjimaika izany, amin’ny 1 janoary ho avy izao.
Fanamby Milokaloka ny avy amin’ny Ceni amin’ny fanajana tanteraka an’izay voalazan’ireo lalàna mifehy ny fifidianana. “Enina andro aorian’ ny fotoam-pifidianana no fetra fahatongavan’ireo vokatra farany avy any amin’ny sampana mpanisa vato na ny Srmv eny amin’ny Ceni. Fito andro aorian’izay no hanananay hamoahana ny vokatra vonjimaika, araka ny voalazan’ny lalàna. Noho izany, raha ny 25 desambra 2018 no tapitra ny enina andro dia ny 1 janoary 2019 izany no hanambaranay amin’ny fomba ôfisialy ny vokatra vonjimaika”, hoy ny filoha lefitry ny Ceni, Rakotonarivo Thierry.
Fantatra tamin’ity famoahan’ny Ceni ny fandaharam-potoanany ity ihany koa fa hanomboka, anio, ny fanapariahana ireo fitaovana ilaina amin’ny fifidianana eny anivon’ny birao fandatsaham-bato manerana ny Nosy. Isan’izany ny biletà tokana misy ny sarin’ny kandidà Rajoelina Andry laharana faha-13 ny eo ambony ary ny sarin’ny kandidà Ravalomanana Marc Marc laharana faha-25 ny eo ambany.
Manoloana ny fanakianana mikasika ny tsy fahampian’ny fampitam-baovao eo anivon’ny Ceni tamin’ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany lasa teo dia isan’ireo fanovana ataon’ny Ceni amin’izao fihodinana faharoa izao ny fitondrana fanazavana amin’ny haino aman-jery momba ny fivoaran’ny toe-draharaha indroa isan-kerinandro fara- fahakeliny.
Mazia mazia !
Fifidianana solombavambahoaka Hiparitaka ireo mpanara-maso maherin’ny dimy arivo
PAIKADIN’NY FANDRIAMPAHALEMANA :: Niteraka disadisa tao amin’ny governemanta ny fanakianan’i Rakotovao Rivo